Business व्यवसाय फोन अभ्यासहरू जसले तपाईंको ब्रान्डलाई हानी गर्दछ
सोमबार, फेब्रुअरी 21, 2011 शनिबार, अक्टोबर 29, 2011 माइकल रेनल्ड्स
सानो व्यवसाय चलाउन गाह्रो र तनावपूर्ण छ। तपाई निरन्तर बहुविध टोपी लगाउनुहुन्छ, आगो हाल्दै, र सम्भव भएसम्म प्रत्येक डलर तान्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा ध्यान केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंको वित्तीय, तपाईंको कर्मचारीहरू, तपाईंको ग्राहकहरू, र तपाईंको ब्रान्ड र आशा छ कि तपाईंले राम्रो निर्णयहरू हरेक पटक लिन सक्नुहुन्छ।
दुर्भाग्यवस, सबै दिशाहरूका साथ साना व्यवसाय मालिकहरू तान्छन्, ब्रान्डि enoughमा पर्याप्त समय र ध्यान दिन गाह्रो हुन सक्छ। जे होस्, ब्रान्डि the सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू वा तपाईंको व्यवसाय मध्ये एक हो र तपाईंले आफ्ना सम्भावित ग्राहकहरूलाई दिनुहुने पहिलो प्रभावको साथ ठूलो व्यवहार गर्न सक्दछ।
पहिलो प्रभाव को ठूलो कम्पोनेन्ट भनेको तपाईले फोनलाई कसरी जवाफ दिनुहुन्छ जब कुनै सम्भावनाले तपाईंको व्यवसायलाई कल गर्दछ। धेरै साना व्यवसायहरूले सस्तोमा कम प्रोफेश्नल फोन प्रणालीको साथ प्रयास गर्दछन् र दुर्भाग्यवश यसले पहिलो प्रभावलाई बिगार्न सक्छ। यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन मैले धेरै देखेको छु जुन समस्याग्रस्त हुन सक्छ।
१. तपाईको सेल फोन नम्बर तपाईको ब्यापार फोन नम्बरको रूपमा प्रयोग गर्दै। यदि तपाईं एकलका लागि हुनुहुन्छ भने, यो राम्रो विचार होईन। सबैले भन्न सक्छन् जब तिनीहरू सेल फोन कल गर्दैछन्, विशेष गरी जब जब भ्वाइस मेलमा जान्छ र मानक मोबाइल भ्वाइसमेल अभिवादन दिन्छ। यो कलरहरूलाई एक शौकिया प्रभाव दिन्छ र संकेत छ कि तपाईं एक-मानिस पसल हो। त्यहाँ एक मानिस भएको पसलमा केहि गलत छैन तर यस तर्फ यस कुरामा ध्यान आकर्षित गर्नु उपयुक्त छैन।
२. "नमस्ते" को साथ फोनको उत्तर दिँदै? र अरू केहि छैन। यदि म व्यापारमा कल गर्दै छु भने, म फोनको उत्तर दिईरहेको मान्छेलाई ब्यक्तिगत अभिवादन पछि व्यवसायको नाम भन्ने अपेक्षा गर्दछु। यदि म सिधा लाइन कल गर्दैछु वा भर्खरै स्थानान्तरण गरिएको छ भने, व्यवसायको नाम छोड्नका लागि यो राम्रो छ तर मँ व्यक्तिको नामबाट सुन्ने आशा गर्दछु। यो पेशेवर शिष्टाचार हो र व्यापार कुराकानीको लागि सही टोन सेट गर्न मद्दत गर्दछ।
A. "सामान्य" भ्वाइस मेल बक्स। जब तपाईं एक व्यापार कल र कुनै एक जवाफ, तपाईं कहिलेकाहीं एक "सामान्य" भ्वाइस मेल बक्स र कुनै अन्य विकल्पहरू पाउनुहुन्छ? के तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि सन्देश छोड्दा प्रतिक्रिया दिनेछ? न त I. पहिलो बन्द, एक रिसेप्शनिस्ट प्राप्त गर्नुहोस् (वा राम्रो) भर्चुअल रिसेप्शनिस्ट सेवा)। सबै भन्दा राम्रो केस परिदृश्य यो हो कि कल गर्नेहरूले प्रत्येक पटक वास्तविक व्यक्ति पाउनेछन्। यदि तपाईंसँग रिसेप्शनिस्ट छैन भने, कम्तिमा एउटा अटो-अटेंडन्ट प्रस्ताव गर्नुहोस् जसले कलरलाई सही व्यक्तिलाई सन्देश छोड्नका लागि खोज्दछ।
A. एक रेखा जसले भ्वाइस मेल स्वीकार गर्दैन। यो "सामान्य" भ्वाइस मेल बक्स भन्दा पनि खराब छ। कहिलेकाँही जब मैले व्यवसायलाई कल गर्छु र कसैले पनि जवाफ दिँदैन भने, मलाई अभिवादन पठाइनेछ जुन मलाई भ्वाइस मेल नछोड्ने बताउँछ किनकि यो जाँच हुनेछैन। साँच्चै? यो केवल साधारण अशिष्ट छ। सबै व्यस्त छन् र यदि मैले कसैलाई पुग्ने आशामा फोन गर्न समय निकाल्नुपर्‍यो भने, म अगाडि बढ्न सक्दछु। मैले पत्ता लगाए कि मेडिकल कार्यालयहरू यसको लागि प्राय: दोषी छन्।
A. एक सस्तो वीओआईपी सेवा। भ्वाइस आईपी उत्तम छ र लामो यात्रामा आयो। जहाँसम्म, यसले आवाजको गुणस्तरमा अझै समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ र दुई-पक्ष कुराकानीमा पनि उल्लेखनीय ढिलाइ सिर्जना गर्न सक्दछ। यस कारणका लागि, स्काईप, Google भ्वाइस, वा प्राथमिक व्यापार लाइनहरूको लागि अन्य निःशुल्क सेवाहरूमा भर पर्नु आदर्श छैन। यदि तपाईं वीओआईपी मार्गमा जान लाग्नु भएको छ भने, प्रोफेशनल वीओआईपी समाधानमा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ जसले तपाईंलाई स्पष्ट अडियो र विश्वसनीयता दिन्छ। केहि चीजहरू अधिक निराशाजनक छन् एक व्यापार सम्झौता बन्द गर्ने प्रयास गर्दा तपाईंको ग्राहकसँग अविश्वसनीय फोन लाइनहरूमा कुराकानी गर्न संघर्ष गर्दा।
यसले तपाईका कल गर्नेहरूको लागि पेशेवर फोन अनुभव सिर्जना गर्न धेरै मेहनत लिदैन तर यसले कल गर्दा उनीहरूको पहिलो प्रभावमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। मा SpinWeb, हामीले फेला पारेका छ کہ रिसेप्शनिस्ट + आईफोनहरूको एक ठूलो टोलीले हाम्रो लागि राम्रो काम गर्दछ। यो कसैले सोच्दा तपाइँको व्यवसाय कस्तो लाग्छ सोच्न को लागी पैसा दिन्छ।
टैग: मोबाइल र ट्याब्लेट मार्केटिंगमार्केटिंग खोज्नुहोस्WordPress
ओह उह ... गुगलले केवल एसईए उद्योग शुरू गर्‍यो
तपाइँ सोशल मिडियालाई कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ?
माइक - के तपाईंसँग डेस्क फोन पनि छ, वा के तपाईं आफ्नो आईफोनहरूमा रुट गर्नुहुन्छ?
फेब्रुअरी १,, २०११ 22:१:2011 अपराह्न
हामी सबै कुरा आईफोनमा मार्ग दिन्छौं। हाम्रो लागि कुनै ठूलो कुरूप डेस्क फोनहरू छैन
यति सजिलो अझै पछ्याइएको छैन।
फेब्रुअरी १,, २०११ 24:१:2011 अपराह्न
म # 1 सँग असहमत छु। एकल व्यवसाय चलाउँदा, त्यहाँ सेल फोन तपाईंको मुख्य लाइनको रूपमा प्रयोग गर्नमा कुनै गलत छैन। यदि तपाईले ग्रीटिंगलाई कस्टमाइज गर्नुभयो र फोनमा जवाफ दिनुहुन्छ भने यसलाई पेशेवर राख्नु हुन्छ। यो ल्यान्डलाइन वा स्थानमा बाँध्नु भन्दा बढी सुविधाजनक छ (हो, सबै कल-फर्वार्डिंग टेक्नोलोजी र त्यस्तासँग पनि) र मलाई मेरा ग्राहकहरूलाई राम्रो, द्रुत सेवा अनुभव प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ।
मैले विगत years बर्षमा सेलफोन प्रयोग गरेको छु। म यो प्रयोग गर्दछ किनकि यो मेरो घर फोन भन्दा फरक रेखा हो। यो सँग व्यवसाय सम्बन्धी सन्देश छ, र जब म यसको उत्तर दिन्छु, साथी वा व्यापार, म भन्छु, नमस्कार, यो लिसा सान्तोरो हो। मलाई थाहा छैन सेलफोन को हो तपाईंले कल गर्दै हुनुहुन्छ तर यो जानकारी धेरै पुरानो हो।
फेब्रुअरी १,, २०११ 28:१:2011 अपराह्न
जब तपाईं सेल फोन कल गर्नुहुन्छ र भ्वाइस मेल प्राप्त गर्नुहुन्छ, यो स्पष्ट छ कि यो सेलफोन हो भ्वाइसमेल अभिवादनको आधारमा, यो अनुकूलन नगरेसम्म, जुन प्राय व्यक्तिहरू गर्दैनन्। यदि तपाइँ कम्पनीको लागि व्यवसाय नम्बर कल गर्नुहुन्छ र यो सेल फोन भ्वाइस मेलमा जान्छ भने, यो थोरै नकरात्मक संकेत हुन सक्छ यदि कम्पनी पेशेवर खोज्न चाहान्छ भने। केहि व्यवसायहरू एकल छविका साथ ठीक छन्। केही छैन। प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद! 🙂
मार्क्स 2, 2011 मा 3: 53 PM
के कोही राम्रो VoIP सेवा सिफारिश गर्न सक्छन्? स्वरमा कुनै समीक्षा?
मार्क्स 2, 2011 मा 5: 04 PM
LJ, हाम्रो सानो कार्यालयले Ooma प्रयोग गर्दै छ (extension विस्तारहरू सम्म) र खुसी भए।